LibreOffice 7.1 inosvika neCommunity label seyetsika inobata maziso | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 7.1 inosvika neChitagi tag seyazvino unooneka
Zhizha rapfuura maalarm akaenda. Gwaro reSiseko rakaburitsa vhezheni yehofisi yavo yakanyorwa kuti "Yemunhu", izvo zvakaita kuti tifunge kuti vachatanga kugadzira sarudzo ine hushoma uye yakazara-iyo ingangowanikwa kune vashandisi vanobhadharwa. Iyo kambani nekukurumidza yakaramba makuhwa aya, ichiti izvo zvavari kugadzirira zvaive zvekubhadhara, hongu, asi yaive rutsigiro (rubatsiro), pakati pezvimwe zvakanaka uye kuti, kune vashandisi vasingazvidi, zvese zvaizoenderera sepakutanga. Iyo taki yakaonekwa muLO 7.0, asi vakaibvisa. Nhasi, nekutangwa kwe LibreOffice 7.1, yatove pano, asi zvakasiyana.
Saka yaziviswa nhasi TDF, ichitaura kuti LibreOffice 7.1 Nharaunda yatovepo, uye kuti iri vhezheni inotsigirwa nevanozvipira munharaunda. Naizvozvo, ndawedzera iyo tag Nharaunda kujekesa kuti software haina kuitirwa mabhizinesi, uye haina kugadzirirwa yako yekutsigira zvaunoda. Kune mabhizinesi, kambani inokurudzira LibreOffice Enterprise, iyo inosanganisira vhezheni yedesktop, nhare, gore, nerutsigiro rweLTS, rubatsiro rwehunyanzvi, maficha etsika, uye zvimwe zvakanaka, zvinotsanangurwa mu Iyi link.
LibreOffice 7.1 Nharaunda uye Bhizinesi: inenge yakafanana, asi rutsigiro rwakasiyana
TDF inoti makambani mazhinji akasarudza iyo yeCommunity vhezheni, uye iri idambudziko. Iyo vanozvipira vanofanirwa kubatsira makambani, uye izvo zvinovaita vanopambadza nguva iyo yavanogona kushandisa muLibreOffice kusimudzira, saka zvese zvinodzora.
Nezve nhau dzakabatanidzwa muLibreOffice 7.1 Nharaunda, isu tine:
New dialog box kusarudza mhando yemushandisi interface, kuitira kuti usarudze chaiyo mushandisi interface zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi wega wega pakutanga.
Kuvandudzwa kwekutsvaga kweprinta saizi saizi inoenderana negwaro rakadhindwa.
Ratidza mafaera ese akatsigirwa kana uchiwedzera kuwedzerwa kutsva muExpension Manager.
Iyo yekudhinda yekutarisa ikozvino yakagadziridzwa asynchronously, kuti isazopaza mushandisi interface kana uchigadzirisa masetingi mune yekudhinda dialog.
Wedzera-ons dialog: kutsvaga, kuwana uye kuisa ekuwedzera nekukosha kamwe chete.
Nyowani Style muongorori kuratidza hunhu uye ndima dhizaini hunhu, uye manyore fomati (yakanangana fomati) zvivakwa.
Iyo default anchor yemifananidzo ichangowedzerwa inogona kugadzirirwa uchishandisa Zvishandiso ▸ Sarudzo ▸ LibreOffice Munyori.
Kugona kuona Unicode, kunyangwe iyo yekunze faira faira isina bhiri rezvinhu (byte odha chiratidzo).
Kukosha kwakakosha mukutsvaga / kutsiva kumhanya.
Wakawedzera imwe sarudzo yekugadzirisa kunama nekiyi yekupinda, iyo inogona kuve inogoneswa / yakaremara muZvishandiso - Sarudzo, LibreOffice Calc - General Dialog Bhokisi.
Wakawedzera sarudzo yekusarudza zvinhu muAustFilter hwindo nekudzvanya kwese mutsara wezvinhu, mukuwedzera kubhokisi rekutarisa.
Inokosha yekumhanyisa yekumisikidza yeAustFilter uye tsvaga / kutsiva mashandiro.
Impress uye Dhirowa:
Mano ekuwedzera masiginecha anooneka kumafaira ePDF aripo muDraw.
Kugona kushandura mifananidzo yezvinhu zvakawanda kamwechete muImpress.
Wakawedzera "Kumbomira / Tangazve" uye "Buda" mabhatani kune anounza skrini.
Ichokwadi mimvuri yakapfava yakawedzerwa kuzvinhu.
Wakawedzera nyowani fizikisi-yakavakirwa emifananidzo kugona uye nyowani ehupenyu maficha ekusetesa ayo anoashandisa.
Macro: ScriptForge Raibhurari, yakasimba uye inowedzera muunganidzwa wemacro scripting zviwanikwa zveLibreOffice inokokwa kubva kuChechi kana Python zvinyorwa zvevashandisi.
LibreOffice 7.1.0 ikozvino yave kuwanikwa kune ese akatsigirwa masisitimu kubva kune iro peji peji senguva dzose, iro rinogona kuwanikwa kubva pano. Rangarira kuti iyi ndiyo vhezheni yepamusoro yeprojekti, uye kuti Iyo Gwaro Sisekelo inoramba ichikurudzira LibreOffice 7.0.4 yezvikwata zvekugadzira. Uku kurudziro haina kubva parutsigiro rwunopihwa, asi asi kuti iri vhezheni ine zvigadziriso zvakawanda zvinovimbika. Mumazuva mashoma anotevera, LO7.1.0 ichatanga kuoneka seyekuvandudzwa mune akasiyana maLinux, sekureba sekunge isu tiri kushandisa ndiyo yepamusoro sarudzo yesoftware.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LibreOffice 7.1 inosvika neChitagi tag seyazvino unooneka
Kugadzira Ubuntu server yakachengeteka. Mamwe matanho ekufunga
Kuderera kweFirefox kuri kuwedzera kucherechedzwa uye kusiiwa kwemapurojekiti kuri kuwedzera